Yugyan Daily » आँखाको दृष्टि राम्रो बनाउने प्राकृतिक तरिका
आँखाको दृष्टि नै गुमाउनु प¥यो भने ?
अहिले धेरैको लागि अनिवार्य आवश्यक्ता बनेको छ, चस्मा । अर्थात उनीहरुमा कुनै न कुनै आँखाको समस्या छ । आँखाको दृष्टि नै गुमाउनु प¥यो भने ? सामान्य अवस्थामा भएकाले यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । जबकी आँखामा के कारणले क्षति पुग्छ, कसरी यसको दृष्टि सुरक्षित राख्ने भनेर खासै सरोकार राखेको पनि पाइदैन ।